ဂီတ နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာမှမသိဘဲ ဆရာကြီးလုပ်ဝေဖန်သူတွေ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အိမ့်ချစ် – Let Pan Daily
ဂီတ နဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘာမှမသိဘဲ ဆရာကြီးလုပ်ဝေဖန်သူတွေ အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အိမ့်ချစ်
Let Pan | May 30, 2020 | Celebrity | No Comments
အိမ့်ချစ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ဂီတအနုပညာရှင် မျိုးဆက်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူချစ်ကောင်းလိုပဲ ပရိသတ်အချစ်တွေရရှိထားကာ ထူးချွန်တဲ့အနုပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် အောင်မြင်နေသူပါ။
အိမ့်ချစ်ကတော့သူချစ်တဲ့ ဂီတပညာကို မသိနားမလည်ဘဲ ဝေဖန်နေကြတာကြောင့် စိတ်အပျက်ကြီးပျက်နေတာပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ် My Story မှာ “Music နဲ့ပတ်သက်ရင်သိသလိုတတ်သလိုနဲ့ဝေဖန်တာဆိုးတယ်။တော်တော်ရှင်းပြရခက်တယ်လေ။ ကိုယ်ကရှင်းပြသူကမသိ ဒါပေမဲ့ သိချင်ယောင်ဆောင် ဆရာကြီးလုပ် အဲ့မှာကိုယ်ကထပ်ရှင်း အဲ့တော့ဘာမှမပြောတာအကောင်းဆုံး ” ဆိုပြီးတော့ ရင်ဖွင့်ရေးသားခဲ့တာပါ။
လောကကြီးမှာတော့ ပညာရပ်တစ်ခုကို အမှန်တကယ် မသိဘဲမတတ်ဘဲ ဆရာကြီးလုပ်ဝေဖန်တတ်သူတွေ ရှိတတ် တာပါ။ အိမ့်ချစ်ကတော့ ဂီတအကြောင်းကို နားမလည်ဘဲဝေဖန်နေတဲ့သူကို သေသေ ချာချာရှင်းပြမိကာမှ ပိုဆိုးသွားတဲ့အကြောင်း ကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါပြီနော်..
Source : EaintChit
လူထု လှုပျရှားမှုမြားတှငျ မပါဝငျဘဲနဲ့တောငျ ကဆြုံး ခဲ့ရတဲ့ အပွဈမဲ့တဲ့ ကလေးငယျတှအေတှကျ ရငျကှဲမတတျ ခံစားနရေတဲ့ ပနျးရောငျခွယျ
ဘယ်သူမှ မထင်ထားလောက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုကြောင့် ပိုက်ဆံတွေ ကြိတ်စု ဖြစ်နေတဲ့ ခြူးလေး ….
သူမြားတှနေဲ့ မတူအောငျ အိမျခေါငျမိုး ပျေါတကျပွီး အမိုကျစားပိုဈ့ ပေးထားတဲ့ မျောဒယျလျ မိုးမွငျ့သဇငျ ရဲ့ ပုံရိပျမြား
ရငျခုနျစရာ ကောငျးလောကျအောငျ ဆကျဆီကြ နတေဲ့ သှနျးဆကျ ရဲ့ ဗီဒီယို
အမိုကျစားကောကျကွောငျး အလှတှေ ထငျရှား စှာ ပျေါနတေဲ့ ပုံလေးတှေ တငျပေး လာတဲ့ နနျးမှစေံ
မွနျမာဝတျစုံလေး နဲ့ တငျးရငျးကိတျနတေဲ့ အလှတရားတှေ ကို မွငျတှရေမယျ့ ရှငျယှနျးမွတျ
ဆကျဆီ ကပြွီး အမိုကျစား ပုံတှေ နဲ့ ညို့ အား ပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျ မှု ရှိလှနျး နတေဲ့ ခြောကလြာ
နှဈခါ ပွနျကွညျ့ခငျြလောကျ အလှတရား တှေ ပျေါလှငျလှနျး နတေဲ့ ဟလေရီစိုး